Oclean X Pro Smart Ibhrashi yamazinyo-Libala kooGqirha bamazinyo | TeraNews.net
I-Oclean X Pro ibhrashi yamazinyo ehlakaniphile - libala ngoogqirha bamazinyo
umbhali UNikitin Eugenius Papashwe ngomhla 01.11.2021
Iimveliso zohlobo lwe-Oclean azidingi kwaziswa. Xa kuziwa kwimveliso yococeko lomlomo, olu phawu ngowokuqala ukuza kuhlangula. Umenzi wakwazi ukudibanisa iteknoloji ephezulu ngokulula ukusetyenziswa, ukubonelela umthengi ngempahla ngexabiso elihle. Ibrashi yamazinyo ehlakaniphile ye-Oclean X Pro ayiyondlela ithile. Into emnandi kukuba umenzi wenze imveliso efanelekileyo kwaye wenze ukuba kube lula ukuyithenga ngexabiso lentengo.
I-Oclean X Pro ibrashi yamazinyo ehlakaniphile-izibonelelo
Ngokuqinisekileyo, ixabiso elifikelelekayo lolona ncedo luphambili. Ngaphezu koko, kwicandelo layo, uphawu lwe-Oclean alunabakhuphiswano abaninzi. Ngezantsi ungabona iinkcukacha ngokuthelekisa i-Oclean X Pro, umzekelo, kunye ne-brand ye-Oral-B eyaziwayo.
Izibonelelo ze-Oclean X Pro smart toothbrush:
Ulawulo oluhle. Ubukho besikrini esichukumisayo esine-diagonal ye-intshi ye-0.96 ngokuqinisekileyo abugqithisi. Kutheni ungaboneleli umnini ngolawulo olucacileyo kunye nokubonelela ngeendlela ezikhethiweyo. Akukho mfuneko yokucofa amaqhosha, ukhetha indlela efanelekileyo - yonke into ilula kakhulu. Ngendlela, ukuyila kwebrashi yamazinyo akuzange kuchaphazeleke. Ngokuchasene noko, i-Oclean X Pro ijongeka njengesixhobo sexesha elizayo.
Ukucoca amazinyo okukumgangatho ophezulu. I-Maglev brushless motor iyakwazi ukuya kuthi ga kwi-42 yeentshukumo ngomzuzu. Loo nto ininzi, nakuyo nayiphi na ibrashi yamazinyo yombane.
Inkqubo yokucoca amazinyo e-Smart. I-Oclean X Pro ine-gyroscope ekwazi ukubona indlela yokuhamba, i-angle of inclination kunye noxinzelelo lwe-brush kwi-enamel yezinyo. Ewe, yile nto kanye asizange siyibone kwiibhrashi zamazinyo zohlahlo lwabiwo-mali.
Iindlela ezininzi zokucoca. Yenza izibalo - iindlela ezi-3 zokucoca (rhoqo, umhlophe kunye ne-massage). Amanqanaba angama-32 obunzima (kunye neendlela zokusebenza - oku sele sele kuguquko lwe-96). Kwaye ezinye izicwangciso ze-20 esele zenziwe kwimemori ye-Oclean X Pro toothbrush. Akuyonyani ukuba umninimzi uya kuzisebenzisa zonke, kodwa ngokuqinisekileyo uya kufumana ukhetho olufanelekileyo lokuxubha amazinyo akhe.
Ukuzimela okugqwesileyo. Umenzi ubanga ukuba ibrashi iya kusebenza kangangeentsuku ezingama-30 kwintlawulo yebhetri enye. Ngendlela, kuthatha iiyure ezi-2 kuphela ukutshaja ibhetri. Nangona ukucoca ngokucokisekileyo, i-Oclean X Pro idlula bonke abakhuphisana nabo ngamaxesha angama-2-3 ngokwexesha lokusebenza.
Iibrashi zamazinyo zeOclean X Pro vs Oral-B iO 8
Omnye umntu uya kuthi awukwazi ukuthelekisa iimveliso zomenzi waseTshayina kunye ne-brand eyaziwayo eJamani. Kwaye kuya kuba kuphosakele. Ngokwendlela yokusebenza, u-Oclean uye wagqwesa umntu okhuphisana nexabiso eliphezulu u-Oral-B. Ewe, kukho iziphene kwisicwangciso sobonelelo. Umzekelo, i-Oral-B iO 8 iza nesikhululo sokutshaja kazibuthe kwaye inesibali-xesha esakhelwe ngaphakathi esinesalathiso sokukhanya. Kodwa ukuhlawula amaxesha ama-2 ngaphezulu kwezi nuances ngandlela thile kuyabiza.
Umenzi I-Oclean X Pro (eTshayina) Oral-B iO 8 (eJamani)
Ubomi ngentlawulo enye Iintsuku ze-30 Iintsuku ze-14
Umboniso wombala ukuba ukuba
Uqhagamshelo lwe-smartphone Ewe (ukucoca ngokupheleleyo) ukuba
Iindlela zokucoca 3 (kukho 20 ufakelo) 6
Amanqanaba okuqina 32 1
Te knoloji I-Ultrasound Magnet
Brashisha imilo yentloko Okweqanda Isangqa
Ukucoca imihla ngemihla ukuba ukuba
Ukhathalelo lwentsini ukuba ukuba
Ukucoca ngobuchule akukho ukuba
Ukucoca ulwimi akukho akukho
Isalathiso esikhanyayo sokucoca okuchanekileyo (okungalunganga). akukho ukuba
Isibali-xesha ngokucoca ixesha ukuba ukuba
Ukungcangcazela ukuba ukuba
ixabiso elicetyiswayo $120 $300
Kumxholo we-brand yaseTshayina i-Oclean, ibrashi yamazinyo ehlakaniphile ye-Oclean X Pro ikhutshwe ngewaranti esemthethweni yeminyaka emi-2 yomenzi. Oku kubonisa ukuba inkampani ivelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokwenene. Umthengisi unokuthumela iimpahla kwiindawo zokugcina iimpahla ePoland okanye eRashiya - oku kuqinisekisa ukuhanjiswa kwempahla ngokukhawuleza kubathengi.
Ungathenga ibrashi yamazinyo ye-Oclean X Pro nge eli khonkco kwi aliexpress... Sincoma ukusebenzisa amakhuphoni esaphulelo:
I-SPTOWH150 (i-odolo ngaphezu kwe-ruble ye-690 - i-ruble ye-150 isaphulelo).
I-SPTOWH250 (i-odolo ngaphezu kwe-ruble ye-1290 - i-ruble ye-250 isaphulelo).
I-SPTOWH350 (i-odolo ngaphezu kwe-ruble ye-1990 - i-ruble ye-350 isaphulelo).
I-SPTOWH450 (i-odolo ngaphezu kwe-ruble ye-2690 - i-ruble ye-450 isaphulelo).
I-SPTOWH600 (i-odolo ngaphezu kwe-ruble ye-3490 - i-ruble ye-600 isaphulelo).
I-SPTOWH800 (i-odolo ngaphezu kwe-ruble ye-4890 - i-ruble ye-800 isaphulelo).